फरकधार / जेठ ११, २०७६
काठमाडौं– केही महिनाअघिको कुरा हो । अभिनेत्री मिथिला शर्मालाई फोन आयो । त्यो फोन थियो– रङ्गकर्मी टंक चौलागाईंको ।
मिथिलाले फोन के उठाएकी थिइन, टंकले कुनै भूमिका नबाँधी भने– दिदी, हामी योगमाया उपन्यासमाथि नाटक गर्दैछौँ । तपाईं गर्नुहुन्छ, यो किताब पढ्नु भएको छ ?
मिथिलाले केही भनिन् । टंकले नै भने– अहिले स्क्रिप्टमा काम गरिरहेको छु, म फेरि फोन गर्छु । विचार गर्नु है ।
टंकको यो प्रस्तावले मिथिला खुसी भइन् । तर, तत्काल उनले कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । उनले निलम कार्की निहारिकाको मदन पुरस्कार जितेको यो उपन्यास त पढेकी थिइन्, तर योगमायाको भूमिकामा आफूले न्याय गर्न सक्छु भन्ने लागेकै थिएन । तर, उनको एउटा मनले भन्यो– तिमीले यो गर्नै पर्छ ।
टंकको फोन फेरि आउला भन्ने सोचेर मिथिलाले फेरि उपन्यास दोहोर्याएर पढ्न थालिन् ।
तर, लामो समयसम्म टंकले मिथिलालाई फोन नै गरेनन् । अब मिथिलाले सोच्न थालिन्– टंक पनि अरु भाइहरुजस्तै होलान् जसले प्रस्ताव गरे, अनि हराए ।
निकै पछि एक दिन फेरि टंकले मिथिलालाई फोन गरे । सुख भनौँ कि दुःख त्यति बेला मिथिला शर्माकी आमा अस्पतालको शैय्यामा मृत्युसँग लडिरहेकी थिइन् । टंक स्क्रिप्ट लिएर त आइपुगे तर मिथिला कुरै गर्न नपाइ अस्पताल दौडनु पर्ने भयो । उनकी आमाको निधन भयो ।
त्यसको केही समयपछि मिथिलाले स्क्रिप्ट पढिन् । उनको चित्त बुझ्यो । त्यसैले त अहिले उनी प्रज्ञा कुञ्ज स्कूलको हलमा नाटक योगमायाको रिहर्सल गरिरहेकी छिन् । केही समयपछि मन्चन हुने नाटकमा उनी मुख्य भूमिकामा देखिन लागेकी छिन् ।
रंगमन्चमा मिथिलाको यो २० वर्षपछिको प्रवेश हो ।
‘पहिले ३० भन्दा बढी नाटकमा काम त गरेकी छु,’ मिथिलाले सुनाइन्, ‘तर, मेरो रंगमन्चको इतिहास कतै हराएको छ, कतै म रङ्गकर्मी हुँ भनेर चिनिन्नँ ।’
हुन पनि मिथिला नृत्यांगना भनेर चिनिन्छिन् । ‘१० वर्षको हुँदादेखि मन्चमा नाच्न थालेँ,’ उनले भनिन्, ‘नृत्यलाई मैले बढी प्राथमिकता दिँदै गएँ, नाटक साइड लाग्दै गयो ।’
योबीचमा मिथिलालाई नाटकका प्रस्ताव आइरहेका हुन्थे । तर, उनले आफूले खोजेजस्तो बोल्ड र राम्रो पात्र भएर काम गर्ने नाटक नै पाउन सकिनन् । ‘कति प्रस्तावका क्यारेक्टरले मलाई तान्न सकेनन्,’ उनको अनुहारमा मुस्कान देखियो, ‘मैले त्यस्ता अफर रिजेक्ट गरिदिएँ ।’
यस्तो हुनुको खास कारण चाहिँ मिथिलाको ‘च्वाइस’ हो । उनी आफैं पनि आफ्ना नाटकहरुमा अलिक ‘स्ट्रङ’ पात्रको खोजी गर्छिन्, ‘मनलाई छुने पात्र मेरो प्राथमिकतामा पर्छन् ।’
त्यस्तै पात्र हुन्, योगमाया मिथिलाका लागि । उनको मनलाई भित्रैदेखि छोएकाले मिथिलाले योगमायाको भूमिकामा देखिने निर्णय गरेकी हुन् ।
अनि अहिले रिहर्सलमा आनन्द आइरहेको उनले महसुस गरेकी छिन् । भन्छिन् ‘योगमायको भूमिकामा अभिनय गर्न त्यति सजिलो छैन । यो एकदमै एकदमै गहन क्यारेक्टर छ ।’ बोल्दाबोल्दै मिथिलाले लामो सास तानिन् । अनि थपिन्, ‘मिथिलालाई योगमायामा ढाल्न त्यति सजिलो छैन । योगमायालाई आपूmमा ल्याउन हजारौँ पटक मिथिला भएर जन्मिनुपर्छ ।’
उनलाई लागिरहेको छ, योगमायाको क्यारेक्टरमा आफू देखिनु भनेको समुद्रबाट जति ल्याए पनि दुई अँजुली पानी ल्याएको जति मात्र भए जस्तै हो । किनकि उनलाई लागेको छ, ‘योगमायामा अथाहा ज्ञान र सिप छ ।
त्यो सब बुझेर अगाडि बढ्न मिथिलाले दैनिक चार घन्टा रिहर्सलका लागि नै छुट्ट्याएकी छिन् ।
२० वर्षपछि रंगमन्चमा फर्किएकी मिथिलालाई अहिले कस्तो अनभुव भइरहेको छ त ?
उनी भन्छिन्, ‘नयाँ पुस्ता सिर्जनशील छ । पछिल्लो समय थिएटरको जुन एउटा माहोल बनेको छ, पहिले त त्यस्तो माहोल नै थिएन । अहिले म नयाँ पुस्ता र नयाँ टेक्नोलोजीमा अभ्यस्त हुने प्रयास गरिरहेकी छु, मलाई आनन्द आइरहेको छ ।’
उनको पालमा र अहिले नयाँ पुस्तासँग नाटकको रिहर्सल गर्ने तरिकामा भने मिथिलाले खासै फरक पाएकी छैनन् । बरु उनलाई त पहिले नै रिहर्सल अझ ‘कडा’ हुने गरेको आभास भयो ।
नृत्य, फिल्म र सिरियलमा सशक्त अभिनयका कारण बालबालिका, युवायुवती लगायत बुढापाका सबैको नजरमा बसिसकेकी मिथिलाको कलाकारिता यात्रा पनि निकै लामो र रोचक छ ।
उनी नृत्यमा रमाउँदै थिइन् । एकदिन उनको अनुहारमा एक्सप्रेसन देखेर बालकृष्ण समले उनलाई नाटकका लागि प्रस्ताव गरे । उनी खुसीले नाटकमा लागिन् ।
सुरुमा उनले हाडा एण्ड पालको समूहबाट कमेडी नाटकहरु गर्न थालिन् । त्यसपछि उनी सानाठूला नाटकहरुमा देखिन थालिन् । समयक्रममा हरिहर शर्मा, हरिप्रसाद रिमाल, बालकृष्ण सम, रबी शाहलगायतको नाटकमा काम गर्ने मौका पाइन्, मिथिलाले ।
यसअघि १० वर्षअघि मिथिलाले नेपाल आमा भन्ने नाटकमा काम गरेकी थिइन् । तर, त्यसलाई उनी लामो नाटकका रुपमा लिन्नन् । त्यसैले त उनलाई लाग्छ, आफू अब थिएटरमा २० वर्षपछि फर्किँदै छिन् ।
त्यसो त मिथिलाले गरेका केही नाटक पछि फिल्म पनि बने । मिथिलाको सौभाग्य, उनले ती फिल्ममा पनि अभिनय गर्ने मौका पाइन् । ‘मुनामदन’, ‘बसाइँ’, ‘म’, ‘मुटुको व्यथा’लगायतमा ठूलो पर्दामा देखिएकी मिथिला अब केही दिनपछि फेरि रंगमन्चमा आउँदै छिन् । यसपटक उनी ‘योगमाया’को भूमिकामा हुनेछिन् ।
‘त्यसैले पनि यो मेरालागि विशेष छ,’ उनले भनिन् ।